Ajụjụ - Xiamen NEWYEA Technology Co., Ltd.
Ego ole ka ọ ga -adabara ọdụ ụgbọ ala eletrik?
"Ọnụ iji wụnye ọdụ ụgbọ ala
Ụgwọ ọdụ ụgbọ ụlọ EV
Ọnụ ego mba niile ($ 1,200)
Nkezi nso ($ 850- $ 2,200)
Ọnụ ego kacha nta ($ 300)
Ego kacha ($ 4500) "
Ego ole ka ọ na -eri iji wụnye ọdụ ụgbọ ala eletrik na India?
Ịwụnye chaja ngwa ngwa nwere ike ịkwụ Rs 2-3 lakh dabere na teknụzụ, onye ọrụ gọọmentị kwuru.
Ị na -enweta ebe nkwụnye ọkụ mgbe ịzụrụ ụgbọ ala eletrik?
Iji chajịa ụgbọ ala eletrik n'ụlọ, ị ga -achọ ebe nkwụnye ụgwọ ụlọ ebe ị na -adọba ụgbọ ala eletrik gị, ma ọ bụ eriri ọkọnọ EVSE maka oghere plọg 3 dị ka nkwado ndabere oge ụfọdụ. Ndị ọkwọ ụgbọ ala na-ahọrọkarị ebe a na-akwụ ụgwọ ụlọ n'ihi na ọ na-adị ngwa ngwa yana ihe nchekwa arụnyere n'ime ya.
Kedu ụlọ ọrụ chaja kacha mma EV?
Nhọrọ onye nchịkọta akụkọ: JuiceBox Pro 40 ya na JuiceNet. ...
Siemens VersiCharge chaja ụlọ. ...
Bosch Ọkwa 2 EV chaja. ...
ChargePoint Flex WiFi Kwadoro chaja EV. ...
Zencar Portable EV chaja. ...
Ọkwa Duosida 2 chaja EV Portable. ...
MUSTART Ọkwa 2 chaja chaja ebugharị. ...
ClipperCreek HCS-40 EV Charging Station. "
Ekwesịrị m ịkwụ ụgwọ ụgbọ ala eletrik m kwa abalị?
Ọ tụgharịrị na ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala eletrik anaghị echegbu onwe ha ịbanye na abalị ọ bụla, ma ọ bụ na ha ga-akwụ ụgwọ nke ọma. Ndị mmadụ nwere omume ịkwọ ụgbọala oge niile, ma ọ bụrụ na nke ahụ pụtara kilomita 40 ma ọ bụ 50 kwa ụbọchị, nkwụnye ole na ole n'izu dị mma. ... Maka pasent 40 ọzọ, ụfọdụ nwere ike ịkwụ ụgwọ n'ọrụ.
Enwere m ike ịwụnye chaja Ọkwa 3 n'ụlọ?
A na -eji ọdụ ụgbọ ala ọkwa 3, ma ọ bụ DC Fast Chargers, na ntọala azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebe ha na -adịkarị oke ọnụ ma chọọ akụrụngwa pụrụ iche na ike iji rụọ ọrụ. Nke a pụtara na DC Fast Chargers adịghị maka nrụnye ụlọ.
Ị na -echekwa ụgbọ ala eletrik n'ezie?
Chọpụta ihe ọzọ na www.energy.gov/eGallon. Ụgbọ ala eletrik (nke a makwaara dị ka ụgbọ ala eletriki ma ọ bụ EV) nwere ike ịchekwa gị ego, yana ọnụ ahịa mmanụ ala dị ala karịa nke ụgbọ ala mmanụ ụgbọ ala. ... Ọkụ eletrik dị ọnụ ala karịa mmanụ ụgbọ ala yana EVs na -arụ ọrụ nke ọma karịa ụgbọ ala mmanụ ụgbọala.
Ị nwere ike ịtinye ụgbọ ala eletrik n'ime ụzọ ọpụpụ mgbe niile?
Ụgbọ ala eletrik niile emepụtara nke ọma taa gụnyere otu chaja nke ị nwere ike tinye n'ime ọpụpụ ọkọlọtọ 110v ọ bụla. Ngalaba a na -eme ka o kwe omume ịgba ụgwọ EV gị site na ọpụpụ ụlọ mgbe niile. Ọdịda ala nke chaja EV na ọpụpụ 110v bụ na ọ na -ewe obere oge.
Ego ole ka ọ na -eri iji kwụọ ụgbọ ala eletrik gị na Walmart?
Ọzọkwa ọkọlọtọ 2, chaja 240-volt ga-adị maka ụgbọ ala eletriki na ngwakọ nkwụnye na-enweghị ike ịgba ụgwọ ngwa ngwa DC. Ọnụ maka iji ụlọ ọrụ na -akwụ ụgwọ ụgbọ eletrik bụ cents 12 kwa kWh - nkezi mba.
Ogologo oge ole ka ụgbọ ala eletrik ga -adị?
"Ogologo ndụ batrị
Batrị ọ bụla n'ime ụgbọ ala eletriki rere na US na -abịa na akwụkwọ ikike nke na -ewe opekata mpe afọ asatọ ma ọ bụ ruo 100,000 kilomita, CarFax kwuru.
Kedu ka China siri tinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ụgbọ ala ọhụrụ nde ise n'okporo ụzọ n'ime afọ iri？
Na njedebe nke 2020, e mere ihe dị mkpa mgbe ụgbọ ala ọhụrụ nde 4.92 (NEVs), gụnyere eletriki batrị, ngwakọ nkwụnye, na ụgbọ ala mmanụ ụgbọala, na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ China. Ndị a bụ 1.75% nke ngụkọta ụgbọ ala nke mba ahụ. Afọ iri gara aga, China ebubatala ihe dị ka puku NEV 20,000 naanị na mba niile, ọ bụ naanị afọ asatọ gara aga ka China guzobere atụmatụ etiti oge maka mmepe NEV nke gbadoro ụkwụ na mkpokọta nde ụgbọ ala ise rere na njedebe 2020. Nke a pụtara na n'ime naanị afọ iri, ọnụ ọgụgụ ndị NEV nke China mụbara ihe dị ka okpukpu 250!